Google anwalela na Canary Chrome na koodu QR ịkekọrịta | Gam akporosis
Nhọrọ ịkekọrịta na Chrome site na koodu QR dị na Canary (yana dinosaur)
N'afọ gara aga Google malitere inwale nhọrọ nkekọrịta ohuru na Chrome site na koodu QR. Ma ka oge na bọtịnụ maka ya emeghị ihe ọ bụla, taa na Canary ị nwere ike ịhụworị koodu emere site na ọmarịcha Google dinosaur dị n'etiti.
Canary bụ nsụgharị nke Chrome ebe nnwale nnwale nke ọtụtụ atụmatụ ahụ mgbe ahụ ha ga-enweta nsụgharị ikpeazụ, Yabụ nnọọ ikekwe anyị ga-enwe ike ịkekọrịta site na usoro QR code a.
Echere m, ihe ọ bụrụ na anyị rụọ ọrụ kwesịrị ekwesị «Chrome Flag», Chrome ga - emepụta akara QR nke anyị nwere ike iji kesaa websaịtị ị were. Nnukwu arụmọrụ iji nwee ike ịkekọrịta onye ọ bụla yana igwefoto ka i scanomi ya wee gaa ozugbo na URL ahụ emepụtara. Nke a bụ Chrome Flag:
chrome: // flags / # nkekọrịta-qr-code-generator
Ọbụna site na QR code window ị nwere ike gbanwee URL ahụ na-enweghị ịnyagharịa na ibe ọhụrụ. Kedu ihe enwere njedebe nke mkpụrụedemede 84 na njedebe nke URL ahụ. Ee ee, koodu ndị ahụ emepụtara na QR na-arụ ọrụ ugbu a, yabụ ị nwere ike iji igwefoto QR kachasị amasị gị, dịka otu ihe ahụ sitere na Galaxy nke gụnyere ọrụ a, ma ọ bụ otu Google Lens iji nyochaa ya.
Kedu ihe kọrọ n'oge a bụ ikike nwee ike ibudata koodu QR. Nke ahụ bụ, ịnwere ike ibupụ ya ozugbo dị ka onyonyo JPG ma jiri ya mee ihe ọ bụla ebe ị hụrụ mkpa iji ya. Agbanyeghị ị nwere ike ịdepụta nseta ihuenyo ahụ iji nweta ya.
Ihe niile kwuru, mbipute 84.0.4116.2 bụ otu ibudata na Chrome Canary maka Windows. N'oge a ọ bụghị na gam akporo, yabụ obere ndidi maka atụmatụ na-adọrọ mmasị maka ihe nchọgharị kachasị amasị anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Nhọrọ ịkekọrịta na Chrome site na koodu QR dị na Canary (yana dinosaur)
Sọpụrụ 20E bụ ọrụ: 6,21 "ihuenyo na okpukpu atọ n'azụ
Nubia Play na-egosi nkọwa mbụ ya, silhouette ya na igbe mkpọsa ya